Warshadda bacda cuntada ee Shiinaha
Badanaa bacda cunnada eyga ee suuqa ku jira waxaa lagu soo ridaa baco balaastik ah. Waxaa laga yaabaa in qof walba uu u maleynayo in boorsooyinkan ay isku mid yihiin, ma jiro wax farqi ah, laakiin maahan. Baakadaha cuntada xayawaanka ah waxaa loo samayn karaa laba lakab, saddex lakab, ama xitaa afar lakab. Aynu wax badan ka ogaano.
Bacaha hoose ee Flat waa nooca ugu caansan ee loogu talagalay boorsooyinka cuntada xayawaanka, waxay hanan kartaa cuntada xayawaanka waaweyn, waxayna u muuqataa mid qurux badan oo shelf ah, waa wax soo jiidasho leh. Iyo boorsooyinka istaaga iyo bacaha gusset-ka ee dhammaantood caan ku ah cuntada xayawaanka iyo xayawaanka cunto fudud.
Boorsada bisaduhu waxay noqon kartaa boorso istaag ah ama shandad gusset dhinac ah ama bac hoose oo fidsan, boorsooyinka istaaga waxaa lagu talinayaa in la haysto qashinka yar yar iyo kuwa dhexdhexaadka ah, iyo bacaha gusset-ka iyo boorsooyinka hoose ee fidsan ayaa lagula talinayaa inay xajistaan ​​weyn Waxaa lagu dahaadhi karaa 2 lakab, 3 lakab ama 4 lakab.
Bacda cuntada ee kalluunka ayaa aad u kordheysa sannadahan, Xayawaan ahaan waxyaabaha la isku qurxiyo, kalluunka waxaa sii kordhaya bini'aadanka sida xayawaanka ， taas oo horseedda cunnada kalluunka inay noqdaan wax soo saar caan ah. Si kaluunka looga caawiyo inuu qaato nafaqada hodanka ah, cunnada kalluunka sidoo kale waa laga dhigay mid aad u horumarsan. Bacda cuntada kalluunka waxay kaa caawin kartaa inaad keydiso cuntada kalluunka muddo dheer ayna keydiso waxyaabaha cusub ee kalluunka ku jira.